Muuri News Network » NORWEY: oo bilaabaysa inay sharciyada kala noqoto soomaalida..(Caddeyn)
NORWEY: oo bilaabaysa inay sharciyada kala noqoto soomaalida..(Caddeyn)
Apr 25, 2016 - Comments off
Kowdii bishan aan ku guda jirno ee April sanadkan 2016 ayaa wasiirada arimaha soo galootiga wadanka Norwey naagta lagu magaacabo Sylvi Listhaug soo rogtay go aan cusub oo ah in dadka qaxootiga ah ee magangalyada ku joogo Norwey lagala noqon karo sharciga dal-kujooga, dibna loogu celin karo wadankii ay ka yimaadeen. Hadii ay nabad ka dhalato wadankii ay ka yimaadeen, meeshana ay ka baxdo baahidii qofka ku qasabtay inuu wadankiisi uu kasoo qaxo marii hore. Sidoo kale waxay sheegtay inay dowlada Norwey ay rabto in dadkan ay ka qayb qaataan dib u dhiska iyo nabad kusoo dabaalida wadankii ay ka yimaadeen. Go aankan cusub ayaa daba socdo heshiis ay xisbiyada Ap, Høyre, Frp, KrF, Sp iyo Venstre ay galeen 19. november 2015, kuna saabsanaa xiisada ka dhalatay qoxootiga kusoo fatahay yurub sanadkii 2015.
Wasiiradan oo ka tirsan xisbiga mayalka adag ee FRP ayaa intaas ku dartay in sharciga caalamiga ah ee qoxootiga(Geneva convention) iyo sharciga qoxootiga ee Norwey uu ogolyahay in qofka haysta magalgalyo ku meel-gaar ah lagu celin karo wadankii uu asal ahaa ka yimid hadii ay nabad ka dhalato. Taas oo micnaheedu in qofkii haystay sharci magangalyo ku meelgaar ah(Midlertidig oppholdtillatelse)lagala noqon karo sharciga, loona diidi karo sharciga degenaanshaha abidka ah(permanent oppholdtillatelse).
Norwey ayaa noqotay wadankii ugu horeeyay ee katirsan qaarada Yurub ee qaata go aan noocan oo kale ah. Waxa ayna dowladu sheegtay in sanadkii 2015 ay Norwey yimaadeen dad qoxooti ah oo tiro ahaan gaarayo 31.000 00 qof, oo badankooda ka yimid wadanka Siiriya. Sanadkan 2016 ayaa laga yaabaa in tirada intaas wax badan ka badato. Arintaas oo culeys dhaqaale iyo mid dhaqan labadaba keeni karta. Waxayna sheegeen in ay dib u-dajinta iyo howsha dadkan tirada badan ay keeni karto in uu culeys fuulo maamulada magaalooyinka, isla markaana ay buuxin waayaan shaqadii ay uga baahnaayeen dadka deegaanka ah.
Arintan qofkee ayay saameynaysaa?
Sida aan ka soo xiganay webka dowlada norwey(regjeringen.no) ee arinta lagu shaaciyay, go aankan waxa uusan saameyn ku yeelan doonin:
Qofkii heysta sharciga degenaanshaha(Permanent oppholdtillatelse): arintan saameyn kuma yeelanayso, maadaama uu haysto sharci uu abid ku deganaan karo Norwey.
Qofka laga soo qaaday xeryaha qoxootiga ee aan Norwey iskiis u imaan: arintan sidoo kale saameyn kuma yeelanayso.
Qofkii ku yimid qof qoys ahaan ah ama loo dacwooday: sidoo kale saameyn kuma yeelanayso.
Qofkii sharci ku helay arimo bini aadanimo, sidoo kale saameyn kuma yeelanays.
Sida ku qoran webka dowlada arinta waxay saameyn ku yeelan doontaa dadka sharciga magangalyada ku helay qaanuunka magangalyada qodobkiisa 28-aad, xarfaha a iyo b: dadka norwey iska soo dhiibay ee qaab qoxootinimo ku helay sharciga
Go aanka u gaarka ah dadka ka yimid Somalia:
1-april go aanka kasoo baxay dowlada waxaa ku qornaa inuu dhaqangalayo isla maalintaasba.
8-april-2016 ayay waaxda agaasinka soo galootiga iyo ajnabiga ee Norwey(Utlendingsdirektoratet, UDI) ay amar u dirtay dhamaan xafiisyada police-ka, taas oo ay ku dalbanayso in loo soo gudbiyo dhamaan kaysaska la xiriira dadka la qiimaynayo in sharciga lagala noqonayo iyo in kale. Si gaar waxay u magacaabeen dadka ka yimid soomaaliya in loo soo gudbiyo kiisaskooda oo waxaa ku qoran:
Codsiyada degenaanshaha dadka ka yimid soomaaliya ee helay sharci-magangalyo kumeel gaarka ah wixii ka horeeyay kowdii oktober 2014. UDI waxay ogolaatay in dadka lagu celin karo soomaaliya desember 2012. Wixii ka danbeeyayna xiligaas ilaa oktober 2014 waxay waday sidii howshaas loo suurto galin lahaa. Taas oo keentay in dib loo eego baahidii magangalyo ee qofka in ay meesha ka baxayso iyo inkale.
Waxaa kaloo ku qoran in aan qofka loo cusboonaysiin karin sharciga kumeel gaarka ah ama passporka yarka ah ee lagu safro.